Sary Maromaro Mampiseho Ny Fiainana Ankoatra Ny Ady Sy Ny Voina Ao Palestina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2014 13:29 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Español, हिन्दी, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Mampiseho lehilahy Palestiniana roa ao Gaza mitazana ny tanànan'izy ireo ravan'ny fanafihan'i Israely ity sary ity, izay nomena lohateny hoe “Tazana Ao Gaza” ity.
Hatramin'ny nanangan'i Brandon Stanton ny pejin'ny Humans of New York “Olombelon'i New York” (HONY) malaza dia malaza tamin'ny Novambra 2010 ity, dia pejy an-jatony manerana izao tontolo izao ihany koa no nitsangana taorian'izany. Somary tsotra ny lohahevitra izay saiky mitovy avokoa ao amin'ny pejy rehetra: mpaka sary na vondrona mpaka sary manodidina ny faritra, tanàna ambanivohitra, tanàndehibe na firenena ary manolotra fanontaniana hoan'ireo olona miaraka amin'ny sary mendrika ho tsarovana.
Nipaka manerana ny vazantany efatry ny planeta ny tetikasa, Rio De Janeiro ka hatrany Tehran, manavatsava ny ankamaroan'ireo firenena ao Azia, Afrika, Eoropa ary Amerika. Tsy tsikaritra avy hatrany ny fitombon'ny fanentanana ataon'ny tetikasa, araka ny nolazain'ilay mpaneho hevitra iray tao amin'ny sarin'ny HONY vao haingana: “Miandry fatratra izay sary mivoaka isan'andro aho amin'izao fotoana izao. Manavao indray ny fitokisako amin'ny mahaolombelona izy ireo” Nahazo tiako maherin'ny 7.000 izany fanehoa-kevitra izany.
Ao amin'ny sisintany Palestiniana voabodo, ilaina tokoa ny fananganana fanentanana. Ary izany indrindra no kinasan'ny “Olombelon'i Palestina“. Raha nanontany an'i Jafar Zuabi, iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipan'ny Olombelon'i Palestina ny Global Voices, mba hamaritra ny hevitra ambadiky ny Olombelon'i Palestina, dia hoy izy:
“Ity no zazakely voalohany natolotra ahy. Mazen no anarany. Eo ambanin'ny fanarahamason'ny Dr. Nashwa Skaik ao amin'ny hopitaly al-Shifaa ny asa. Iray amin'ireo fotoana mahafinaritra indrindra eo amin'ny fiainako.”(rohy)
Mijoro amin'ny karazan'endriky ny HONY amin'ny filazalazana momba ny Palestiniana sy an'i Palestina ary ireo any ampielezana sy ireo lasa nifindra monina ny pejy izay manana mpanjohy mihoatra ny 22 000 ao amin'ny Facebook sy 7500 ao amin'ny Twitter. Hita tokoa moa ny ekipan'ny Olombelon'i Palestina fa mitantara an'i Gaza, ny Morondrano Andrefana, Israely, ny tobim-pialokalofan'ny Palestiniana manerana ny Tontolo Arabo ary ny Palestiniana ampielezana.
Ekipan'olona dimy izahay ato amin'ny Olombelon'i Palestina: Ny mpanangana ny pejy, Anas Hamra avy ao Gaza; We'am, Haneen ary izaho avy ao Ramallah; ary i Niraz avy ao amin'ny Tobim-Pialokalofan'i Yarmouk ao Syria.
“Nipetraka tao ambadiky ny fasan'i Naji Al-Ali's (mpanao sariitatra Palestiniana) aho, mieritreritra ireo olona mahafinaritra izay nofafan'i Israely tao anaty sarintany, sy ny fomba nitoeran'izy rehetra teo amin'ny fiainantsika. Raha mieritreritra ireo olona ireo aho, tsy mihevitra azy ireo ho ‘maty’. Ka inona aloha ny fahafatesana? Izany dia araka ny ninian'i Ghassan Kanafani nilazana hoe: “Ny lehilahy , amin'ny fiafaran'ny andro, dia lasa tolona iray.” Raha mieritreritra ireo maritiora aho, tsy mihevitra azy ireo amin'ny hamaroany. Olona manana fahatsiarovana, fianakaviana, nofinofy iombonana izy ireo – ary noesorina tsotra izao tamin'izy ireo fotsiny ireny rehetra ireny. Manala ny fiarova-tenako ilay hevitra. Hoan'ireo izay nanolotra tamin-kafanam-po ny ainy, hoan'ireo izay noesorina taminy tamin-kerisetra ny nofinofiny, tsy afa-mamerina ny fanahinareo madio ny ranomason'izao tontolo izao. Manaja anareo” (rohy)
- Tsy mpanafikafina aho na mangatakataka araka ny heverin'ny ankamaroan'ny olona (rohy)